Ndị Anyị Bụ - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Onye anyị na-
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind bụ nnukwu ọgụgụ isi ahụike na mgbaka ọrụ ebere na South East London, na-ekpuchi mpaghara nke ihe dịka square kilomita 90 na ọnụ ọgụgụ ndị karịrị 868,000 mmadụ. Anyị emeela nke ọma afọ ndị na-adịbeghị anya.
Anyị bụ akụkụ nke Mind gọọmentị mana dịrị dị ka ọrụ ebere edebanyere onwe anyị. Nke a pụtara na ebe anyị nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke ezinụlọ 'Mind', anyị ga-ahụ maka ịchị onwe anyị, amụma na njikwa ego, gụnyere ị nweta ego anyị.
Anyị na-arụrụ ọrụ ọrụ Ndị ọrụ 180 kwụrụ ụgwọ na ndị ọrụ afọ ofufo 240 iji nyefee ọrụ anyị na ndị nlekọta anyị na-ahapụ oge ha bara uru iji chịkwaa nzukọ ahụ. Ndị ọrụ anyị nwere nkà ma raara onwe anyị nye bụ akụ kachasị anyị, na-arụsi ọrụ ike 'ịnọ ebe ahụ mgbe ọ dị mkpa' maka ndị mmadụ si n'ọtụtụ ebe.
Anyị na -egosipụta ụkpụrụ anyị bụ isi mgbe niile:
Gụnyere n'ụzọ anyị na ihe niile anyị na -eme, ka anyị wee na -egbo mkpa nke obodo anyị dị iche iche nke ọma.
anabata nye onye ọ bụla anyị na -akwado na mkpa ha pụrụ iche, akụkọ ihe mere eme na ebumnuche ha.
Mgbanwe - na -egosipụta nkwalite na -aga n'ihu, ịdị ike, ihe ọhụrụ na ịdị irè.
Ọnụ - anyị na ndị mmekọ anyị na ndị mmadụ nwere ahụmịhe ahụike nke nsogbu ahụike uche na mgbaka na netwọkụ nkwado ha.
Ihe kachasị anyị mkpa bụ inyere aka mee ka ndụ dịrị ndị nwere nsogbu ọgụgụ isi na mgbaka, bi na mpaghara atọ anyị na-eje ozi. Kwa afọ anyị na-akwado ihe dịka mmadụ 7,000 nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka.
Anyị gbanyere mkpọrọgwụ n'ime obodo anyị, na-agbasi mbọ ike mgbe niile ịnye ọrụ ndị kwekọrọ na mkpa ndị ahịa anyị. Anyị na-aza mkpa nke ndị mmadụ site na ọrụ ahaziri iche ma na-agbanwe mgbe niile iji nye ụzọ ọhụrụ, ụzọ ọhụụ na ụzọ dị mma iji nyere ndị mmadụ aka ma kwado ha. Agbakwunyere na nke a bụ nkwa anyị iche iche na nsonye na isonye ndị nwere ahụmihe dị ndụ na nhazi ọrụ anyị na nnyefe anyị.
Otu akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị na-elekwasị anya na ịmara banyere ahụike ọgụgụ isi na mgbaka, imebi ihere metụtara yana melite nghọta ndị mmadụ site na ọzụzụ, nkuzi na ndụmọdụ iji mee ka ndị mmadụ nwee nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka iji bie ndụ kachasị mma.
Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị na ndị otu mpaghara ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ, na-esite n'ike anyị niile iji nye ndị mmadụ nkwado kacha mma. A na-enyefe ọtụtụ ọrụ anyị na mmekorita ya na ndị ọrụ ebere ndị ọzọ yana ndị ụlọ ọrụ NHS Foundation Trusts.
Ọrụ Ahụike Ọgụgụ Isi
Anyị na-enye ozi, ndụmọdụ na nchebara echiche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ndị mmadụ gafere ụdị dị iche iche site na nwayọ ruo na nsogbu ahụike uche siri ike.
Anyị nwere ọtụtụ ebe iche iche, gụnyere ndụmọdụ, nke enyere n'asụsụ 20, nkwado ọrụ na ọrụ ndị mesiri ike na nkwado ndị ọgbọ.
Anyị na-enyere ndị nwere mgbaka aka ịnagide nchoputa ha ma jigide nnwere onwe ha site n'inye ha ozi ndụmọdụ na nkwado, ma nye ndị nlekọta ha ezigbo ezumike site na isi mgbaka anyị ọrụ ezumike.
Ọrụ Nlekọta & Ndozi
Anyị na-enye ọrụ iji nyere ndị niile bi na ya aka ka ọ dị mma, gụnyere nkwado ezubere maka atụrụ anya na nne na nna ọhụrụ na ụmụ akwụkwọ mahadum.